Etu esi wụnye WhatsApp na Mac | Esi m mac
Esi wụnye WhatsApp na Mac
Ekwuru m mgbe niile na m ga-ekwusi ike na ihe WhatsApp mere iji weta ngwa ya na kọmputa bụ botch. Echere m na n'ihi na ndị mmepe niile chọrọ iji ngwa ha gaa na sistemụ desktọọpụ emeela nke ọma, na-ebute onye ahịa nke ala na-arụkọ ọrụ na oge ndị ọzọ nwere ike ịdị na mbadamba ma ọ bụ smartphone (niile na-agba n'otu oge). N'ọnọdụ ọ bụla, ndị mmepe n'azụ ngwa izi ozi kachasị eji eme ihe n'ụwa mere ihe a maara dị ka Ihe Weebụ WhatsApp.
Ma gịnị bụ WhatsApp Web? Nwere ike ịsị na atụmatụ WhatsApp bụ ngosipụta nke ihe na-eme na ekwentị mkpanaaka anyị. Site na ịnweta weebụ nke ọrụ ma ọ bụ ngwa na-arụ ọrụ, anyị ga-enwe ike ijikọ ihe atụ nke ekwentị anyị na ihe nchọgharị weebụ nke ga-adị, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, windo na-egosi ihe na-eme na WhatsApp nke ekwentị anyị.
Nke a ọ nwere uru ọ bụla karịa ihe ngwa ndị ọzọ na-eme? Ọfọn, enweghị m ike iche nke ọ bụla. N'aka ozo: anyi aghaghi ilezi anya n'ihi na anyi nwere ike ichefu na anyi ejikoro na atumatu data mkpanaka anyi ma zipu nnukwu foto na vidiyo. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị nwere mmasị na ya karịa ma ọ bụ obere, n'isiokwu a anyị ga-akọwa otu o si arụ ọrụ WhatsApp Web na Mac.
1 Nchọgharị dakọtara na WhatsApp Web
2 Etu esi eji WhatsApp Web na Mac
3 Ngwa iji WhatsApp na Mac
4 Mgbakwunye ihe nchọgharị iji jiri WhatsApp
5 Mmechi: ọ bara uru ịwụnye WhatsApp na Mac?
Nchọgharị dakọtara na WhatsApp Web
N'oge a, m ga-aga n'ihu ịkọwa ihe Mac nchọgharị ọ ga-arụ ọrụ na WhatsApp Web (na agaghị m ekwenye ọzọ n'ụzọ ha si mee ihe). Iji jiri ngwá ọrụ a, anyị ga-eji otu n'ime ihe nchọgharị weebụ ndị a:
WhatsApp kwadoro ka anyị jiri ụdị ihe nchọgharị ọ bụla nke gara aga. N'aka nke ozo, odighi mkpa itu nkpu ma oburu na anyi ejighi ihe edere edere a, ebe otutu n'ime ndi adi dabere na ha. Dịka ọmụmaatụ, ugbu a, m na-ede Vivaldi, ihe nchọgharị ọhụrụ sitere n'aka onye isi CEO nke Opera, nke dabere na Chromium (nke n'aka ya dabere na Chrome) ma na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Etu esi eji WhatsApp Web na Mac
Iji WhatsApp Web dị mfe. Anyị ga-eme naanị ihe ndị a:
N'ụzọ ezi uche dị na ya, ihe mbụ ị ga - eme bụ imepe ihe nchọgharị (ma ọ bụ ngwa, dị ka anyị ga - akọwa na ebe na - esote) ma ọ bụrụ na anyị emegheghị ya.
Ọzọ anyị na-aga na peeji nke whatsapp.com, ebe anyị ga-ahụ koodu QR.
Anyị ga-enyocha QR code nke anyị ga-ahụ na ngwaọrụ mkpanaka anyị, yabụ anyị were ama anyị wee mepee WhatsApp.
Na WhatsApp (maka iOS) anyị ga-aga Ntọala / WhatsApp Web. Ozugbo anyị metụrụ nhọrọ ahụ, anyị ga-ahụ interface nke ga-eme ka anyị nyochaa koodu QR.
N'ikpeazụ, anyị ga-elekwasị anya na QR code na, ozugbo njikọ, anyị nwere ike ịchekwa ama anyị.
Ihe mbụ anyị ga - ahụ ga - abụ ihe onyonyo dị ka nke a chọrọ:
Site na ịpị na nkata na-emeghe, olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, anyị ga - abanye nkata ahụ wee hụ ozi niile anyị ka nwere na ekwentị anyị, nke gụnyere foto, vidiyo, ederede olu, wdg. Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ imeghe nkata ọhụrụ, naanị anyị ga-emetụ akara ngosi nke «okwu afụ» (ederede). Dị ka ihe nchọgharị anyị na njikọta na ama anyị na ama anyị jikọtara na burukwa anyị, anyị nwere ike mepee nkata ọhụụ na ndị kọntaktị anyị niile na-eji WhatsApp. Ọ bụrụ na anyị chọrọ iziga faịlụ, naanị anyị ga-eziga ya ka anyị dọrọ na windo nke nkata.
Igodo nwere nhọrọ dikwa. Bọtịnụ a bụ nke nwere isi ihe atọ na site na ebe anyị nwere ike:
Mepụta otu ọhụụ.
Nweta profaịlụ na ọkwa anyị.
Nweta ihe nchọgharị.
Lelee kọntaktị akpọchiri.
Lelee chats echekwara.
Ọ nwere ihe niile anyị ga-achọ ịhụ na ngwa nnwere onwe zuru oke site na ekwentị mkpanaaka anyị. Obi ọmịiko bụ na anyị ga-ejikọta ya na mobile.
Ngwa iji WhatsApp na Mac
Ọ bụrụ na ịdabere na mkpanaka ama dị ka nnukwu ibu iji dabere na ihe nchọgharị ahụ, enwere ngwa maka Mac nke anyị nwere ike ijikọ na WhatsApp Weebụ. Isi uru nke iji ngwa ma ọ bụghị ihe nchọgharị ahụ bụ na ngwa ahụ adịchaghị arọ, yana ọkwa ahụ na-arụ ọrụ ka mma. Dabere na ihe nchọgharị ahụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ebe nrụọrụ weebụ WhatsApp na ndabere, anyị nwere ike ịnweta ọkwa na oge ezighi ezi, nke kachasị mma ga-eme ka ọ daa na ekwentị mkpanaaka anyị na kọmputa anyị.
Enwere ihe pere mpe banyere ụdị ngwa a. Ihe niile m nwara bụ otu ihe ahụ dị ka weebụsaịtị nke ọrụ WhatsApp a, na ọdịiche anyị ga-ahụ ihe niile na windo dị iche na anyị nwekwara ike ịhazigharị ya. Ihe kachasị mma m gbalịrị, karịa maka nnwere onwe karịa maka ihe ọ bụla ọzọ, bụ ChitChat (dị site na HERE).
O doro anya ChitChat es ihe kachasị nso anyị ga-ahụ n'ịwụnye WhatsApp na Mac.
Mgbakwunye ihe nchọgharị iji jiri WhatsApp
Otu nhọrọ n'etiti etiti iji ihe nchọgharị weebụ na ngwa ahụ bụ ịwụnye ndọtị na ihe nchọgharị ahụ. Ọ bụ eziokwu na ọ dị nso na nke mbụ karịa nke abụọ, mana ọ kachasị mma. Enwere ụfọdụ ndọtị na-egosi ọbụna ọnụọgụ ozi na akara ngosi ha, mana enweghị (ọbụlagodi na ngalaba gọọmentị) maka Safari.
Maka Firefox M nwara ma nwee mmasị na WhatsApp Desktọpụ. Maka Chrome, otu n'ime ndị nwere akara kacha mma na ọdịdị bụ WhatsApp Compact, mana ọ bụ ndọtị na anaghị m anwale n'onwe m (anaghị m eji Google Chrome ogologo oge).
Mmechi: ọ bara uru ịwụnye WhatsApp na Mac?
Dịka m kwuru na mbido akwụkwọ a, anaghị m akwado ụzọ WhatsApp si eme ihe, mana ọ ka mma ịnweta ngwa weebụ karịa iji ekwentị mkparịta ụka na ndị anyị na ha kpọtụrụ. N'aka nke ọzọ, ọ dị ka nsogbu a ga - eso anyị mgbe niile n'ihi na WhatsApp na - eji usoro ochie. Agbanyeghi na ha nwere ike ideghari ngwa mgbe obula site na 0.
Ga-enwe mgbe ngwa iji wụnye WhatsApp na Mac nwaafọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Esi wụnye WhatsApp na Mac
Download Franz App na ị nwere WhatsApp na ndị ọzọ !!
Zaghachi Angel Vicedo Davo
oscar mara mma dijo
Anọ m na-eji ya maka ọnwa 3 ọ dị mma
Zaghachi oscar treviño
M na-eji FreeChat maka WhatsApp nke a ka mma !!
Enwerem mac os 10.6… enwere uzo ozo maka nke a? Daalụ
Seattle sonyeere obodo Apple Maps nwere ozi gbasara ụzọ ụgbọ njem ọha